Ozi nkwupute nke afọ 81 nke Onye isi oche Kardemir Öz | RayHaber | raillynews
Homeụgbọ okporo ígwèOnye isi oche nke Board nke Kardemir Öz 81. Ozi ncheta
Onye isi oche nke Board nke Kardemir Öz 81. Ozi ncheta
02 / 04 / 2018 ụgbọ okporo ígwè, General, Turkey
Kardemir Inc. Ömer Faruk Öz, Onye isi oche nke Board of Directors of Kardemir. mmemme nke ncheta ntọala.
Ömer Faruk N’ozi nke ya, Oge ụfọdụ eserese, obere foto ma ọ bụ okwu gbara ume iji gosipụta isiokwu ị na - enweghị ike ịkọwa na iri puku peeji. Mgbe m rịọrọ maka ozi maka 3 Eprel, ihe mbụ batara n'uche bụ "Ọrụ Ọhụụ ọhụụ, agbata ya, Ọganiihu ya na Ọdịmma Ya, na Mgbakọ Mba Nile Na-enwe Obi andtọ na Ike" na Eprel 3.
Enweghi ike ikwuputa ihe di mkpa banyere ulo oru ebe obula na obodo ebe emebere ya.
81, ya na igwe ya na akụrụngwa e ji rụọ ya tọgbọrọ na mpụga Karabük Village, nke bụ ebe obibi na naanị ụlọ 13, ka e hiwere taa na KARDEMİR, nke bụ otu nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke obodo anyị, yana ụlọ 13 nke Ọ bụrụ na anyị na-atụle obodo Karab togetherk ọnụ, ọganihu na mmepeanya enyere ndị agbata obi Karabük Iron na Iron, enwere ike ịghọta nke ọma na ike ọ na-enye obodo ya.
Iron na steel, 81 amuru n’obodo a otutu afo gara aga, toro ma tolite n’obodo a. Mgbe ọ na-eto, o toro ma tolite Karabük, nke ọ bịara dịrị ndụ.
Ka anyị leba anya n’ihe osise dị na foto ọzọ iji mata azịza ajụjụ a.
Iron Iron nke Mbụ.
Emepụtara 10 September 1939 na Karabük.
Total ụwa ígwè mmepụta ụbọchị a 140 nde ise, mgbe Turkey, ndị fọdụrụ ọnwa nke 1939 2,5 13 puku tọn n'afọ nwere ike na-emepụta na Karabük Iron na Steel arụ ọrụ ígwè na-emepụta n'ụwa emeghị ọbụna gụọ.
A mụrụ na Karabük ígwè na ígwè, ulo oru mmepe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke mba anyị ka anyị na-eme a oké onyinye, taa Turkey, ndị kasị ibu n'ụwa 37,5 8 nde tọn ígwè mmepụta. aghọọla onye nrụpụta.
Ọ bụrụ na taa Turkey bụ n'etiti ndị kasị ibu n'ụwa na-emepụta nke abụọ, ebe ọ bụ na ndị dị otú ahụ a nna ukwu nke 1937, na-eme nchara, nke mma enlarge Karabük na na e nwere a nnukwu òkè nke Iron na Steel Factory.
N'oge emume a, aga m achọ igosipụta obi m na obi m niile maka ndị niile si mba anyị niile ma nye aka na nguzobe na nlanarị nke Karabük Iron na steel Work. Ekelere m ndị ọrụ anyị niile bụ ndị ka na-awụ ọsụsọ iji buru ọkọlọtọ nke ndị nna nna ha n’iru.
Birthdaybọchị ọmụmụ niile bụ oge agụkọ. Ka anyị na-aza ajụjụ maka afọ ndị ọzọ, anyị kwesịrị iji ihe ọmụma na ahụmịhe anyị na-eme atụmatụ nke ọma n'ọdịnihu. N'ihi na anyị na-ahụ mgbanwe dị ngwa n’akụkụ niile nke ndụ. Ihe ịtụnanya a na-akpọ ijikọ ụwa ọnụ ma ọ bụ ijikọ ụwa ọnụ ewelila ókèala azụmahịa dị n'etiti mba ụwa. Mba niile na mpaghara niile na-esetịpụ ụzọ ọhụrụ maka mmepe ụwa. Anyị ga-egosipụta nke ọma usoro njikwa iji nwee ike ijigide mgbanwe a ngwa ngwa, nke gụnyere ohere ndị dị mkpa na ihe ọghọm dị ukwuu, na iji ohere ndị ijikọ ụwa ọnụ butere site na iwepu ihe egwu.
Dị ka unu niile mara, ọ dịrịghị Kardemir mfe ịbịaru ụbọchị ndị a. Ihe owuwu ndị a, nke e kpebiri imechi na 1994 na ebumnuche na ha emejuwo ndụ akụ na ụba ha na teknụzụ ha, ọ fọrọ nke nta ka ha nweta njedebe nke ịbụ ndị a na-emechi maka oge nke abụọ na mmalite nke 1995 afọ mgbe 2000 zoro onwe ya. Karịsịa mgbe afọ 2002 gasịrị, Kardemir amaliteghachiri site na itinye ego ya, 81. na-abanyezi n’afọ n’inwe nchekwube na ebumnuche ọhụrụ.
Ebumnuche anyị bụ ibuga Kardemir n'ọkwa tọn nde 2019 na njedebe nke afọ 3,5 ma rute mmepụta ụwa.
Ebumnuche anyị bụ ime ka ngwaahịa dị iche iche dịkwuo elu site na ngwaahịa ndị dị elu bara uru, wee si otú a na-enye aka na mmechi mmebi azụmahịa mba ofesi ma melite asọmpi anyị.
Ebumnuche anyị bụ ime ka anyị nwekwuo ngwaahịa na ogo ọrụ na ọrụ anyị ma belata ụgwọ ọrụ anyị na usoro mmepụta niile.
Ebumnuche anyị bụ inweta ezigbo ihe ịga nke ọma nke ga - enyere aka na ọdịmma na obi ụtọ nke ndị ọrụ anyị, ndị na - eweta ngwaahịa, ndị ahịa, ndị na - ekenye ndị ọzọ, Karabuks na obodo anyị ebe anyị na - emecha ego anyị na - ahụ maka gburugburu ebe obibi wee bụrụ Kardemir na - enwe mmekọrịta gburugburu.
Anyị ga-emezu nke a site n'inye Kardemir ịhụnanya, Karabük ịhụnanya, ịhụnanya obodo na nkwenye anyị na ibe anyị.
81 nke ndị Karabuk niile na ndị ọrụ ibe m. 81 ọzọ na-egosipụta ekele na ekele nye ndị tinyeworo aka na mmepe nke Kardemir na Karabük, ana m echeta ndị hapụrụ anyị ebere.
82 Kardemir. Ememe Ememe Ememe
President Vergili, Kardemir Aş. Onye isi nke Board of Directors Visited Güleç
175 nke okporo ụzọ okporo ụzọ ndị Russia. A na-emepụta eserese maka asọpụrụ Ememme Ntọala ahụ.
158 nke TCDD Alsancak Garda. Ihe ngosi ngosi nke oghere maka ememe ncheta nke Foundation
Minista Arslan, 63 GMO. Soro na Ememe Ncheta
Taa na History: 22 September 2006 TCDD 150. A na-eme ememme ncheta ya.
Taa na akụkọ ihe mere eme: Septemba 23, 2009 N'ime ihe omume ncheta afọ 153, TCDD…
Ememe ncheta nke ntọala nke TCDD ga-ejide ya na Ankara-İzmir YHT akara
Taa na History: 23 September 2009 153. N'ime ihe ememe ncheta ihe omuma ...
Taa na History: 23 September 2009 153. Ememe ncheta ...
TCDD 162. Ememe ntụrụndụ nke Chess
XCDX TCDD. Ememe ncheta 157 na Project 7
3 Aviation Academy nke DHMİ. Ememe Ememe Ememe
Lee omuma zuru oke nke Ömer
Ụlọ ọrụ ígwè na ígwè ígwè
Ndị mmekọ nke TCDD gbakọtara na agụmakwụkwọ
Usoro ọmụmụ ihe ọmụmụ Erzurum Tram na Ọrụ Engineering Nsonaazụ Nsonaazụ